Vondrona Axian: tafiditra ao anatin’ny Afric’Innov ny NextA | NewsMada
Vondrona Axian: tafiditra ao anatin’ny Afric’Innov ny NextA
Firenena faha-20 tafiditra mpikambana ao anatin’ny vondrona Afric’Innov i Madagasikara. Tambajotra ifandraisana hampiroboroboana ny fandraharahana vaovao (SAEI) aty Afrika ity fikambanana ity. Afaka misitraka ny fanohanan’ny Afric’Innov ny NextA eto Madagasikara, vovonana vao natsangan’ny vondrona orinasa Axian.
Mamatsy vola ny Afric’Innov ny Antokon-draharaha frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD), ahitana teknisianina sy matihanina afrikanina sy fikambanana iraisam-pirenena samihafa amin’ny fikarohana zava-baovao amin’ny lafiny fandraharahana sy ny orinasa.
Fanohanana ny orinasa madinika
Tanjona ny hanafainganana ny fandrosoan’ny orinasa aty Afrika satria maro ny tsy ampy maha matihanina na koa tsy ampy hoenti-manana amin’ny fandraharahany tokony hilaina.
Hanamora ny fandraharahan’ny orinasa eto Madagasikara ny NextA, ho afaka hifaninana eo amin’ny tsena. Anjarany ny mametraka sehatra hanohanana ny orinasa malagasy, toy ny fanofanana, ny fanombanana, ny torohevitra. Eo koa ny fampifandraisany amin’ny mpanjifa sy ny mpamatsy, ny fikarohana mpamatsy vola, sy ny hafa.
Miroborobo ny fikarohana zava-baovao
Anisan’ny tena tohanan’ny NextA ny orinasa vao miforona na misandratra (start-up), ny orinasa madinika sy salantsalany (TPE-PME). Nambaran-dRtoa Rakotondrainibe Carole, talen’ny NextA, fa “ahafahanay manamafy ny tohana omenay ny mpandraharaha ahazoana vokatra mahomby ny fidiranay ao anatin’ny Afric’Innov”.
Nilaza kosa ny mpandrindra ny Afric’Innov fa “miroborobo tokoa ny fandraharahana mitady zava-baovao, ankehitriny, ka zava-dehibe ny fampiasam-bola ataon’ny vondrona orinasa tsy miankina toy ny Axian, nanangana ny vovonana NextA”.